निजी विद्यालय छोरा छोरी पढाउने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही ! – Khabarhouse
निजी विद्यालय छोरा छोरी पढाउने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही !
Khabar house | ११ माघ २०७६, शनिबार ०७:१६ | Comments
डोटी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सरकारी कर्मचारीले आफ्ना छोरा छोरीलाई सरकारी स्कुलमा भर्ना नगरे का’रबाही गर्ने बताउनु भएको छ । डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका ४ मा निर्माण हुन लागेको निजामी कर्मचारी बिद्यालयको शिलान्यास गर्नु हुँदै मुख्यमन्त्री भट्टले कारबाहीको चेतावनी दिनुभएको हो ।
सरकारी जागिर खाएर कर्मचारीले छोरा छोरीलाई निजी बोर्डिङमा पढाउने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टले भन्नुभयो, ‘सरकारको पैसा खाएर छोरी छोरी निजी बोर्डिङमा पढाउन पाइदैन, निजी बोर्डिङमा पढाउनेलाइ अब कारबाही हुन्छ ।’ प्रदेशभित्रका निजी विद्याल यमा छोरा छोरी पढाउने सरकारी कर्मचारीको तथ्यांक संकलन गर्ने काम सुरु गर्न लागेको भन्दै उहाँले त्यसबाट आउने तथ्यांक अनुसार कारबाही अघि बढाइने बताउनु भयो ।
२ करोड ३९ लाख लागत ६ कोठे दुइ तले निजामती स्कुलको भवन २०७८ पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको छ। निजामती कर्मचारी स्कुलका लागि १०० रोजनी जमिन खरिद गरेर भवन बनाउन थालिएको हो । आउँदो वर्षमा नयाँ स्कुल भवन आवास गृह, खेलकुद मैदान, स्वीमङ पुल लगाएका संरचनाहरु निर्माण गर्न झण्डै ७५÷८० करोड रकम खर्च गर्ने योजना रहेको मुख्य मन्त्रीका स्वकीय सचिब शिवसिंह ओलीले जानकारी दिनुभयो ।
यो पनि,अदुवाको आम्दानीले किसान दङ्ग : आम्दानीको मुख्य स्रोत रहेको अदुवाको बीउको मूल्य राम्रो भएपछि किसानहरू दङ्ग भएका छन् । विगत वर्षमा अदुवा निकासीमा भएको पटक–पटकको अवरोधले तर्सिएका किसानले अदुवा कम रोपेपछि यो वर्ष सिजनको सुरुमै बीउको मूल्य उच्च भएको छ । गतवर्ष किसानले अदुवाको खेती कम गरेपछि उत्पादन कम हुनु र बीउको माग बढी हुनुले माघको पहिलो सातामै बीउको मूल्य बढी भएको व्यापारीहरू बताउँछन् ।
यो वर्ष प्रतिमन चार हजार पाँच सय रुपियाँका दरले अदुवाको बीउ खरिद–बिक्री भइरहेको छ । मुख्य सिजन माघको सुरुमै बीउको मूल्य राम्रो हुँदा यसपटक भने अदुवाबाट प्रत्यक्ष फाइदा किसानलाई मिलेको सूर्योदय नगरपालिका १२ का किसान भीम राईले बता उनु भयो । फागुनदेखि जेठ महिनासम्म रोपिने अदुवाको असारदेखि भदौसम्म किसानहरूले माउ निकालेर बिक्री गर्ने गरेका छन् । कात्तिकमा नयाँ अदुवा र यतिबेला बीउको अदुवा बिक्री गर्दा अदुवाबाट किसानलाई राम्रो फाइदा मिलेको किसान राईको भनाइ छ।
बीउ अदुवा, बुढी अदुवा, कात्तिकमा खनिने बच्चा र अहिलेको बीउ अदुवा कुनैबाट पनि किसानलाई घाटा छैन, राईले भन्नुभयो तर अदुवा खेतीमा हामीजस्ता साना किसानले कसैबाट सहयोग भने पाउन सकेका छैनौँ। यता इलाम नगरपालिका ५ का किसान साम वेद चापागाईंलाई पनि अहिले अदुवाको बीउ खन्न भ्याई नभ्याई छ । गतवर्ष २५ मन अदुवा रोपेको थिएँ, करिब पाँच मनका दरले उत्पादन भयो, चापागाईंले भन्नुभयो, यो वर्ष पनि २० देखि २५ मन अदुवा रोप्ने तयारी गरेको छु ।
गतवर्ष प्रतिमन पाँच हजार दुई सय रुपियाँका दरले बीउ बिक्री गरेको चापागाईंले यो वर्ष अझ मूल्य बढ्ने सङ्केत देखिएको बताउनु भयो। अहिले नै मूल्य प्रतिमन चार हजार रुपियाँमाथि छ,पछि चैत वैशाख हुँदा अझ मूल्य बढ्ने सम्भावना रहेको चापागाईं बताउनु हुन्छ। इलामको अदुवा रेशादार र राम्रो भएकाले बाहिरबाट माग बढी आउने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन् । यो वर्ष सिजनको सुरुमै अदुवाको मूल्य यसरी बढ्दा किसान तथा व्यापारीलाई पनि राहत मिलेको इलाम बिल्याँटेका व्यापारी कर्ण साम्पाङ्गले बताउनु भयो
यो वर्ष भारतको अदुवा कम उत्पादन भएको र नेपाली किसानले पनि गतवर्ष कम खेती गरेपछि माग उच्च भएपछि विदेश निर्यात हुने अदुवाको मूल्य राम्रो हुने साम्पाङ्गको बुझाइ छ। इलाममा स्थानीय जातकै अदुवाको बढी खेती हुने गरेको छ । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा तीन हजार २३३ हेक्टरमा ४५ हजार ८९० मेक्ट्रिकटन अदुवा उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामले जनाएको छ। इलाम सहित पूर्वाञ्चलका धनकुटा, पाँचथर, तेह्रथुमलगायतका जिल्लामा उत्पादित अदुवा भारतको सिलिगुढी निकासी भएर तेस्रो मुलुक बङ्गलादेश, पाकिस्तानसम्म जाने गरेको छ ।
जेलमा हजारौं कैदीहरुसँग बस्छन् आर्यन खान, कुनै विशेष छुट छ ?
यस्ता कुखुरा पालेर एमाले नेताले गर्छन लाखौंको आम्दानी, किन्न आउनेको भिड लाग्छ
ए’सिडले ज’लेकी संगिताको गासियो लगनगाठो !
पाकिस्तान क्रिकेट टीमका कप्तानलाई ध’म्की : ‘भारतसँग हार्‍यौ भने घर आउन दिँदैनौं’